လူကြိုက်များတဲ့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? | The Restaurant Guides for Myanmar
ကိုရီးယားအစားအစာတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ချက်ပြုတ်တတ်ကြပေမယ့် အစားအစာ အများစုက အေးတဲ့ရာသီနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ အခုလို မိုးရာသီက ပိုပြီးစားလို့ကောင်းစေမယ့် အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုရီးယားအစားအစာတွေကို ဆိုင်မှာဝယ်စားတာထက် မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်စားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုက်လုပ်စားတဲ့အခါ ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစပ်အဟက်ကို စိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်သလို အရသာ အသစ်တွေကိုလည်း ထွင်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလပ်ချိန်တွေမှာ အလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်သလို ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း ရိုးရှင်းတာကြောင့် အိမ်ကမိသားစု/သူငယ်ချင်းတွေကို လက်စွမ်းပြဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
(၁) ကိုရီးယားကင်မ်ချီ ခေါက်ဆွဲပြုတ်
ဝက်သားသုံးထပ်သား (သို့) ကြက်သား၊ ပဲပြား ၁တုံး၊ ဂျင်း၊ နှမ်းဆီ၊ ပဲငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကင်ချီ၊ Gochujang (ကိုရီယား ငရုတ်နှစ်)၊ Gochugaru (ကိုရီးယား ငရုတ်သီးမှုန့်)၊ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်၊ ကြက်ဥ၊ ကြက်သွန်မြိတ်
အရင်ဆုံး ဝက်သားသုံးထပ်သား (သို့) ကြက်သားကို အနေတော် အတုံးလေးတွေတုံးပြီး ပဲငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ နှမ်းဆီတို့နဲ့ နယ်ပြီး (၁၅) မိနစ်လောက် အရသာသွင်းထားပါ။ ပြီးရင်မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ (၁၀) မိနစ်လောက်ချက်ပါ။ ကြက်သွန်နီကို ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး နောက်ထပ် (၈) မိနစ်လောက် ထပ်ချက်ပါ။ ပြီးရင် ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပါ။
ခေါက်ဆွဲပြုတ်မယ့်အိုးထဲ ရေသင့်တော်ရုံထည့်ပြီး ဆူပွက်လာရင် ခေါက်ဆွဲခြောက်ချည်းပဲကို ဘာမှ မထည့်သေးပဲ (၁) မိနစ်လောက်တည်ပြီး ရေသွန်ပစ်ပါ။ ခေါက်ဆွဲကို ရေစစ်ထားပြီး နောက်ထပ် ရေထပ်တည်ပါ။ ဆူလာပြီဆိုရင် အရသာမှုန့်ထုပ်၊ ကင်မ်ချီ၊ ကိုရီးယား ငရုတ်နှစ်ထည့် (၂) မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါ။
ပြီးရင် ဝက်သားသုံးထပ်သား (သို့) ကြက်သားထည့်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် ထည့်ပြီး (၅) မိနစ် လောက်ပြုတ်ပါ။ မာဆတ်ဆတ်လေး ကြိုက်တယ်ဆိုရင် (၃) (၄) မိနစ်လောက်ဆို အတော်ပါပဲ။ မချခင် ကြက်ဥလေးဖောက်ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် စားမယ့်ပန်းကန်လုံးထဲထည့်၊ ကိုရီးယား ငရုတ်သီးမှုန့်လေးဖြူး၊ ကြက်သွန်မြိတ် လှီးထားတာလေး ထည့်စားလိုက်ရင် မိုးအေးအေးနဲ့ အချိန်လည်း မကုန်၊ အရသာလည်းရှိတဲ့ “ရှုးရှဲအရသာ ကိုရီးယားကင်မ်ချီ ခေါက်ဆွဲပြုတ်” ရပါပြီ။
အမဲသား(သို့) ဝက်သား - ၁၅ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ချက်ပြီသား ထမင်း - ဆန်နို့ဆီဗူး ၁လုံးခွဲ
ပဲပင်ပေါက် - လက်တစ်ဆုပ်စာ (ရေဖြင့် စင်အောင်ဆေးပါ)
မုန်လာဥနီ [carrot] - ၁ ထောင့် (အရှည်လိုက်လှီးပါ)
မှိုခြောက် [wild mushroom] - ၄ခု (ရေနွေးဖြင့် ပြုတ်ပြီး အရှည်လှီးပါ)
သခွာသီး [cucumber] - ၁ခု (အခွံမနွာပဲ အရှည်ပါးပါး လှီးပါ)
ကိုရီးယား ငရုတ်သီးအနှစ် - စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ကြက်သွန်မြိတ် [spring onion] - ၁စည်း (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ကြက်ဥ [egg] - ၁လုံး
ဟင်းနုနွယ်ရွက် (သို့) ဆလက်ရွက် [salad] - လက်တဆုတ်စာ (ပါးပါးလှီးပါ)
နှမ်း [seasame seed] - စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
နှမ်းဆီ [seasame oil] - စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
သကြား [sugar] - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
အမဲသားစဉ်းကောကို ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက်)၊ ပဲငံပြာရည်အချို(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ နှမ်းဆီ(အနည်းငယ်) ထည့်နုယ်ပါ။ ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ထည့်ပြီး အမဲများ ကျက်သည်အထိကြော်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်ဆယ်ထားပါ။
ဒယ်ထဲ နှမ်းဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ထည့်ပြီး သခွာသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ မှိုခြောက် အားလုံးကို တလှည့်စီ အရောင်ပြောင်းသည်အထိထည့် ကြော်ပေးပါ။ ရေပွက်ပွက်ဆူသော အိုးထဲသို့ ပဲပင်ပေါက်များထည့်၍ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပေးပြီ ၃မိနစ်ခန့် တည်ထားပေးပါ။ ပြီနောက် ပြန်ဆယ်ပြီ ဆား၊ နှမ်းဆီ အနည်းငယ်ဖြင့် ရောနုယ်ထားပါ။
ပြီးလျှင် ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း မြေအိုးတစ်ခုထဲသို့ (ထမင်း၊ အမဲသား၊ ပဲပင်ပေါက်၊ သခွာသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ မှိုခြောက်၊ ဆလတ်ရွက်၊ ကြက်ဥ) တို့ကို စီထည့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးမှ အရသာအတွက် ငရုတ်သီးအနှစ်၊ နှမ်းဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ သကြား တို့ကိုထည့်ပြီ ဇွန်းဖြင့် သမအောင် ရောနယ်လိုက်ပါ။
အရသာအပေါ့အငံ့မြည်းပြီး အနေတော်လျှင် မြေအိုးကို အဖုံးအုပ်ပြီ မီးအပူဖြင့် ၂မိနစ်ခန့် တည်ထားပေးပြီ ပူပူလေး သုံးဆောင် နိုင်ပါပြီ။ တချို့က ကြက်ဥကို ဖောက်မထည့်ပဲ ကြော်၍ထည့်ပါက မီးအပူပေးရန် မလိုပဲ အသင့်စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ပြီးရင်တော့ ကိုးရီးယားထမင်းသုတ်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ဝက်သား - အနည်းငယ်
ကိုရီးယား ပဲအနှစ် (Choonjang) - ၄ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
ဆီ - ၄ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
သကြား - ၂ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
ခရုဆီ - ၁ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
ပြောင်းဖူးဖလာမှုန့် - ၂ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
ကြက်သွန်နီ - ၂ လုံး (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ဇူကီနီ (Zucchini) - ၁ လုံး
အာလူး - ၂ လုံး
ဂျပန်သခွားသီး - အနည်းငယ်
ရေ - အနည်းငယ်
ပထမဦးစွာ ဒယ်အိုးထဲသို့ ဆီထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို ပါးပါးလှီး၍ ကြက်သွန်နီ နီရဲပြီး ကျွမ်းသွားတဲ့ထိ ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီ အဖက်များကို ဆယ်ထုတ်ပြီး လွင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဆီထဲကို ကိုရီးယား ပဲအမဲရောင်အနှစ်၊ စားပွဲတင်ဇွန်း (၄) ဇွန်းထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ နှံ့အောင်မွှေပေးပါ။
အိုးထဲက ဆီတွေကို ဇွန်းနဲ့ အသာခပ်ထုတ်ပြီး ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပါ။ ဒယ်အိုးထဲက ပဲအနှစ်ထဲကို သကြား စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်းထည့်ပါ။ နှံ့အောင်မွှေပေးပြီး မီးပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ဝက်သားကို သေးသေးလေးတွေတုံးပြီး ဖယ်ထားတဲ့ ဆီနဲ့ကြော်ပါ။
အသားနူးသွားရင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ (ကြက်သွန်နီ ၊ ဇူကီနီ ၊ အာလူး) တို့ကို အတုံးလေးတွေ တုံးပြီး အသားနဲ့ရောလှိမ့်ပါ။ ခရုဆီစားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်းထည့်ပါ။ ပြောင်းဖူးဖလာမှုန့် (ပြောင်းဖူးပုံပါတဲ့ အကြော်မှုန့်) မရှိပါက အခြားဂျုံမှုန့် (၂) ဇွန်းကို ရေ (၃) ဇွန်းဖြင့် ဖျော်ပြီးထည့်ပေးပါ။
ပထမဆုံး ဆီသတ်ထားတဲ့ ကိုရီးယားပဲအနှစ်ပါ ရောထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အရသာမြည်းကြည့်ပြီး အာလူးနဲ့ အသီးအနှံတွေနူးရင် ပြုတ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲပေါ်ကို လောင်းထည့်ပြီး အသင့် စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ကြက်သား - (၁၅) ကျပ်သား (ကြက်သားကြော်ရန်)
ကြက်ဥ - (၁) လုံး
ပြောင်းကော်မှုန့် (သို့) အာလူးကော်မှုန့် - (၂) ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - အနည်းငယ်
ကြက်သွန်ဖြူ - အနည်းငယ် (အချဉ်ပြုလုပ်ရန်)
ပဲငံပြာရည်အကြည် - (၂) ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အနောက် - ဇွန်းတစ်ဝက်
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် (tomato ketchup) – (၁) ဇွန်း
ငရုတ်သီးဖတ်ဆော့စ်အချို (Sweet Chili sauce) - (၁) ဇွန်း
ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် - ဇွန်းတစ်ဝက် (အစပ်ကြိုက်ရင်ပိုထည့်ပါ)
ကြက်ကြော်ဖို့ ကြက်သားကို အတုံးခပ်သေးသေး အနေတော်လေးတွေတုံးပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ အကုန်လုံးကို ရောနယ်လိုက်ပါ။ ဆီပူပူမှာ အရောင်ရဲတဲ့အထိ ဆီမြုပ်အောင် ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ။ နည်းနည်းအအေးခံထားပြီး အတွင်းထဲထိ သေချာကျက်ဖို့ နောက်ထပ် (၃) မိနစ်လောက် ထပ်ကြော်ပေးပါ။
ဆော့စ်စပ်ဖို့က ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဆော့စ်စပ်ဖို့ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ထည့်ကာ ဆော့စ်အနေအထားပုံစံ ပျစ်ပျစ်လေးရောက်တဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ ကြက်ကြော်မထည့်ခင် ဆော့စ်အရသာကို အရင်မြည်းပြီး ဆား၊အချို လိုသလို အနည်းငယ်ထပ်ထည့်လို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင် ကြော်ပြီးသား ကြက်ကြော်ထည့်မွှေပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Korean soft tofu (sundubu) – 350 g (ရိုးရိုးရယ်ဒီမိတ် တို့ဟူးအဖြူအစိမ်းကိုအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်)
ဂုံး - 110g
ပုစွန် - အနည်းငယ်
အပ်မှို၊ ရှီတာကီမှို၊ ကောက်ရိုးမှို - စတဲ့ကိုယ်နှစ်သက်ရာမှို နှစ်မျိုးသုံးမျိူး အနည်းငယ်စီ
ကြက်သွန်မြိတ် - တစ်ချောင်း
ကိုရီးယားငရုတ်သီးမှုန့်(gochugaru) – 1 tsp (အစပ်ကြိုက်ရင်နည်းနည်းပိုထည့်ပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ - တစ်မွှာ (နုပ်နုပ်စင်းထားပါ)
ပဲငံပြာရည် - 1 tsp
ဆား - အနည်းငယ်
ဆီ - အနည်းငယ်
အရင်ဆုံး အိုးထဲမှာဆီထည့်ပြီး ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပဲငံပြာရည်ထည့်ပါ။ အနံ့လေးမွှေးလာတဲ့အထိ တစ်မိနစ်လောက် ဆီသတ်ပေးရပါ။ ဆီသတ်ပြီးရင် ဂုံးနဲ့ ပုစွန်ကိုထည့်ပြီး ငရုတ်သီးဆီသတ်နဲ့ သမအောင်နယ်ပေးပါ။
အပြင်အသားလေးတွေ တင်းသွားရင်တော့ ရေ ဒါမှမဟုတ် dried kelp and anchovy stock ထည့်ပေးရပါမယ်။ dried kelp and anchovy stock ဝယ်ရခက်ပါက ရေထည့်လို့ရပါတယ်။
ပင်လယ်စာအစား ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အသားတစ်မျိုးမျိုးကို အသားတုံးလေးတွေလှီးပြီး ထည့်လို့လည်းရပါတယ်။ ပင်လယ်စာဆိုရင်တော့ ရေထည့်ပြီး နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုတာနဲ့ တို့ဟူးထပ်ထည့်လို့ရပါပြီ။ အသားဆိုရင်တော့ ၅ မိနစ်လောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ပင်လယ်စာထည့်ပြီး နှစ်မိနစ်လောက်နေလို့ အရည်ပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင် မှိုတွေနဲ့ တို့ဟူးကိုထည့်ပြီး (၁) (၂)မိနစ်လောက် ထားပေးပါ။ မီးဖိုပေါ်ကချကာနီးမှ ကြက်ဥတစ်လုံးဖောက်ချလိုက်ရုံပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နဲ့ နှမ်းဆီမွှေးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီး ကြက်သွန်မြိတ်ပါးပါးလေးညှပ်ထည့်ရုံပါပဲ။ (ဒီအဆင့်မှာ ကြက်ဥနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်မကြိုက်ဘူးဆို မထည့်လို့ရပါတယ်)
သက်သတ်လွတ်ချက်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ ပင်လယ်စာနေရာမှာ အသီးရွက်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး သက်သတ်လွတ်ငံပြာရည်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာတော့ ထမင်းဖြူနဲ့ အခြားပေါ့ပေါ့ပါးပါး အရံဟင်းတွေနဲ့ စားသုံးကြပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ရိုးရာအစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Read 1319 times.
ချဉ်ငံစပ် ကြိုက်သူတွေ သွားရည်ယိုစေမယ့် ရခိုင်သခွားသီးသုပ်
ဂျပန်စတိုင် ဆူရှီဆန်းဝှစ် ကို အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်စားမလဲ
အရသာကောင်းပြီး လုပ်ရမခက်တဲ့ ပူတင်းပြုလုပ်နည်း (၅) နည်း